/Lọ ọrụ ntanetị / Pipe - China Tube / Pipe Manufacturers, Suppliers
Polymer PTFE mpempe akwụkwọ
PTFE Plastic mpempe akwụkwọ Atụmatụ: elu bụ zuru okè, enweghị nwa ntụpọ na odo ntụpọ, dozie nkuku, elu gloss. Edo ọkpụrụkpụ; nwere ike ime ka ihe ọ bụla na agba PTFE mpempe akwụkwọ, n'ihi na ihe atụ: Natural ọcha, nwa, odo, ọbara ọbara na na; nke kacha mma arụmọrụ, nwere ike jupụta ọzọ ihe, n'ihi na ihe atụ: Bronze, eriri iko, carbon, graphite, moly, APR , na na; nwere ike idi temperture: -180 ~ + 260; nwere ike ime ka PTFE kpụrụ mpempe akwụkwọ, PTFE skived na PTFE film na ihe ọ bụla nha ...
PTFE agbakọta Pipe gasket
PTFE ejiri pipe gaskets bụ ezigbo ihe ngwọta maka ngwa na-achọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% nguzogide kemịkal na ebe a na-achọkwa ihe eji arụ ọrụ nke ihe eji agbakọ. Ha na-arụ ọrụ nke ọma na ụlọ ọrụ ihe oriri na nhazi ebe a na-enweghị ike ịhapụ mmetọ nke ọkara, Kwesịrị ekwesị maka alkalis siri ike, mmiri cryogenic, oxygen, gas chlorine wdg.
PTFE tubing 7/8 "22mm OD X 5/8" 16mm
N'èzí dayameta - 7/8 ″ (22.2 mm ma ọ bụ .875 na.) N'ime dayameta - 5/8 ″ (15,8 mm ma ọ bụ .600 na.) Wall - 1/8 ″ (3.2 mm ma ọ bụ .131 na.) Polymer nwere ike idi okpomọkụ elu 500 Deg F. Anyị nwere ike belata ogologo ọ bụla maka gị. PTFE tubing na-enye ọnụọgụ esemokwu dị ala nke nwere ike ikwe ka oke dị elu na nsacha dị mfe karị, na-enyere aka iwepu mkpochapu usoro. Low permeation nwere ike ime ka ojiji na oké chemical na ọpụrụiche gas ọrụ. Nakwa ihe dị elu dielec ...
PTFE (nke a makwaara dị ka Polymer) nwere njikọ kachasị mma nke esemokwu nke ihe ọ bụla siri ike ma na-arụ ọrụ nke ọma na oke okpomọkụ. Nke a tube nwere a mma chemical eguzogide na magburu onwe ya mkpuchi ihe Njirimara. Otú ọ dị, PTFE tube nwere ike isi ike ijikọ, mana ọ naghị agbaze ma na-agbanyụ onwe ya. Ndị na-emepụta anyị na-eme plastik injinịa nke pere mpe na dayameta na / ma ọ bụ ọkpụrụkpụ. E nyere nke a iji nyere ndị ahịa aka ...
Ihe: PTFE na-arụ ọrụ okpomọkụ: -200-260 ogo Elongation: ≥348% Ike ọdụdọ: 18 MPa n'èzí dayameta: 50mm PTFE Tube site Extruded, Kpụrụ na Jupụta. Extruded ptfe tubing OD site na 1mm ruo 300mm. Kpụrụ ptfe tubing si 30mm ka 600mm.Filled ptfe (Jupụta graphite, Jupụta Fiber iko, Jupụta Bronze, Jupụta Carbon), Size OD si 30mm ka 600mm. o ptfe tube nwere ọtụtụ ngwa ofụri ụlọ ọrụ. Njirimara pụrụ iche na-ekwe ka tubing dozie nsogbu ga-ekwe omume na-enweghị ot ...
PTFE Press Kpụrụ Tubes, PTFE tubing
Ebu pịa tube maka Virgin PTFE, egweri PTFE, Ọla% mbuaha, Glass eriri weere, Graphite, carbon fibrils, polybenzoate, polybmenzoate, Polyimide mbuaha, wdg Ọzọkwa anyị nwere ike chepụta ihe agwakọta na pasent nke ọ bụla dị ka gị ngwa nke kpụrụ akpa. Jupụta PTFE ohia ka plunger extrusion nke nkwusioru polymerized PTFE resin. N'etiti plastik niile dị ugbu a, FTFE jupụtara na ya nwere ihe kacha mma na-eguzogide na dielectricity. Lead insulating uwe, corrosion na-eguzogide PTFE ohia, ihe ...